ရွှေရင်အေး စားပြီးမှ.... ရေ သောက်ရင်တော့.. တစ်မျိုးပေါ့ကွာ... - Barnyar Barnyar
June 12, 2022 thanzin laypyay funny 0
ရွှေရင်အေး စားပြီးမှ.... ရေ သောက်ရင်တော့.. တစ်မျိုးပေါ့ကွာ...
” ယောက်ျား..” ” ဟေ..”
” တော်… ခင်ဝင့်ဝါကို တော်တော် ကြိုက်လား..?” ” ဟမ်.. ဘာဖြစ်လို့တုန်း..”
” ကျုပ်မေးတာ ဖြေစမ်းပါ..။ တော်.. ခင်ဝင့်ဝါကို.. တော်တော်ကြိုက်လားလို့..”
” နေပါအုံး မိန်းမရယ် ။ ဘာဖြစ်လို့..အဲ့ဒါ လာမေးနေတာလဲ? ”
” ဘာဖြစ်ရမလဲ! ..။ တော်က.. တစိတ်ရှိ.. ပါးစပ်က.. ခင်ဝင့်ဝါ.. ခင်ဝင့်ဝါ.. နဲ့..။ တီဗီက. ခင်ဝင့်ဝါ ကြော်ငြာလေးများ လာရင်လည်း.. မျက်တောင်ကို မခပ်ဘူး…. ကျုပ်တစ်ယောက်လုံး ဘေးမှာ ရှိနေတာကို.. တစိတ်ရှိ အဲ့ခင်ဝင့်ဝါပဲ ဖြစ်နေတာ..။ အဲ့ဒါ.. ရှင်.. တော်တော် ကြိုက်နေလား..လို့..”
” မဆိုင်ဘူးလေ..မိန်းမရယ် ။ သူက မင်းသမီးလေ..”
” မင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်..ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင် ။ ရှင်..အဲ့သည့် ခင်ဝင့်ဝါ ကို..ရရင်.. တကယ် ယူမလား..?”
” မဖြစ်နိုင်တာပဲ မိန်းမရယ်..” ” ဖြစ်နိုင်တာ..မဖြစ်နိုင်တာ..အသာထား။ ကျုပ်မေးတာပဲ..ဖြေ။တော်..အဲ့ခင်ဝင့်ဝါက..တော့်ကို..ယူမယ်ဆိုရင်..တော် ယူမလား..လို့..”
” မိန်းမရယ်..။ မဟုတ်တာကို..မရစ်စမ်းပါနဲ့..။ ဟိုက..မင်းသမီးလေ..ငါ့လိုကောင်ကို.. ယူမလား..။ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာကို..”
” မဖြစ်နိုင်ရင်လည်း..တော့်ပါးစပ်က..ဘာလို့.. အဲ့မင်းသမီးနာမည်ပဲ..တဖွဖွ ရွတ်နေရတာလဲ ။ ဘာလို့..အဲ့မင်းသမီးလာရင်..ပြူးပြဲ ကြည့်နေရတာလဲ..?..။ ကဲ..ပြော..”
” ဪ..မိန်းမရယ် ။ ဒါကတော့..လူတိုင်းမှာ..ရှိတဲ့ အာသီသ..အချစ်မျိုးပေါ့..။ အာသီသ တစ်ခု အနေနဲ့….ချစ်လို့ ချစ်တာ..။ ချစ်စရာကောင်းလို့..ချစ်တာလေ..။ သူ့ကို ချစ်တဲ့အချစ်က..လုံးဝ အဖြူထည်..။ ဘာအရောင်..ဘာကာလာမှ..မပါဘူး။ အဲ့သည့်အချစ်မှာ..ရယူလိုတာတွေ..မပါဘူး။ ”
“ပိုင်ဆိုင်လိုတာတွေ မပါဘူး။ ကာမတဏှာတွေ မပါဘူး..။ ဥပမာ..Ahpine သောက်ရေသန့်လေးလို ပေါ့..။..ဖြူဖြူစင်စင် ကြည်ကြည်လင်လင်..ချစ်တဲ့ အချစ်မျိုးပါကွာ…”
” ဪ..မင်းကြတော့.. အများကြီး ပါသွားပြီလေ။ မင်းကို ချစ်တဲ့အချစ်မှာ ကြတော့… ကာမတဏှာ ပါမယ်။ ရယူပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ အတ္တလောဘ ပါမယ် ။ မခွဲမခွာ နေချင်တဲ့ သံယောဇဉ် ဆိုတာ ပါမယ်။ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်မယ့် ရည်ရွက်ချက် ဆိုတာပါမယ်။ သိုက်မြုံတဲ့မိသားစုလေး.. တည်ဆောက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုတာကလည်း ပါအုံးမယ်..။ အိုကွာ.. မင်းကိုချစ်တဲ့ အချစ်မှာကြတော့…. အများကြီး အများကြီးပေါ့..”
“အင်း.. ဒါဆို.. ကျုပ်ကြတော့ ဘာနဲ့တူသလဲ?”
” အယ်..မင်းကြတော့…. ရွှေရင်အေး တစ်ခွက်လိုပေါ့.မိန်းမရယ်..။ ပေါင်မုန့်တွေ ကောက်ညှင်းတွေ.. ကျောက်ကျောတွေ.. နို့တွေ.. မုန့်လက်ဆောင်းတွေ.. အို.. အဲ့လို စုံစိအောင် ပါနေတဲ့.. အမောပြေ.. ရွှေရင်အေးလေး.. တစ်ခွက်လိုပေါ့..”
” အမလေး..တတ်လိုက်တာနော် ။ယောက်ျား..ခုလို ရှင်းပြလိုက်တော့လည်း..ဟုတ်နေတာပဲ..။ နားလည်ပါပြီတော်..”
” အဲ့ဒါပဲလေ..မိန်းမရယ်။ ရွှေရင်အေးနဲ့ ရေသန့်..။အရသာချင်း..တန်ဖိုးချင်း..တူမလား..။ဟုတ်တယ်နော်.. ကဲ..မင်း​ပြောသလို….ခင်ဝင့်ဝါက..
ငါ့ကို ယူမယ်ပဲ..ထား။ ငါက..ယူလို့..ရမလား?။ မရဘူးနော်..”
” ဟ…မင်းစဉ်းစားကြည့်လေ။ သွသူ..ဘယ်လောက်ပဲ..ကြည်သန့်နေတဲ့ရေ..ဖြစ်ဖြစ်။..ရွှေရင်အေးထဲ..လာရောရင်… အဲ့ရွှေရင်အေးက..ကောင်းပါတော့မလား။ပျက်ပြီလေ။ ..ဟုတ်တယ်နော်”
“အဲ့ဒါ.. ပြောတာ..။ ရွှေရင်အေး စားပြီးမှ…. ရေ သောက်ရင်တော့.. တစ်မျိုးပေါ့..”
“ဘာ.. ဘာ. ဘာ…!!!!!!” 😁😁😁မူရင်းရေးသားသူကိုလေးစားစွာခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
ရှရေငျအေး စားပွီးမှ…. ရေ သောကျရငျတော့.. တဈမြိုးပေါ့ကှာ…
” ယောကျြား..” ” ဟေ..”
” တျော… ခငျဝငျ့ဝါကို တျောတျော ကွိုကျလား..?” ” ဟမျ.. ဘာဖွဈလို့တုနျး..”
” ကြုပျမေးတာ ဖွစေမျးပါ..။ တျော.. ခငျဝငျ့ဝါကို.. တျောတျောကွိုကျလားလို့..”
” နပေါအုံး မိနျးမရယျ ။ ဘာဖွဈလို့..အဲ့ဒါ လာမေးနတောလဲ? ”
” ဘာဖွဈရမလဲ! ..။ တျောက.. တစိတျရှိ.. ပါးစပျက.. ခငျဝငျ့ဝါ.. ခငျဝငျ့ဝါ.. နဲ့..။ တီဗီက. ခငျဝငျ့ဝါ ကွျောငွာလေးမြား လာရငျလညျး.. မကျြတောငျကို မခပျဘူး…. ကြုပျတဈယောကျလုံး ဘေးမှာ ရှိနတောကို.. တစိတျရှိ အဲ့ခငျဝငျ့ဝါပဲ ဖွဈနတော..။ အဲ့ဒါ.. ရှငျ.. တျောတျော ကွိုကျနလေား..လို့..”
” မဆိုငျဘူးလေ..မိနျးမရယျ ။ သူက မငျးသမီးလေ..”
” မငျးသမီးဖွဈဖွဈ..ဘာဖွဈဖွဈရှငျ ။ ရှငျ..အဲ့သညျ့ ခငျဝငျ့ဝါ ကို..ရရငျ.. တကယျ ယူမလား..?”
” မဖွဈနိုငျတာပဲ မိနျးမရယျ..” ” ဖွဈနိုငျတာ..မဖွဈနိုငျတာ..အသာထား။ ကြုပျမေးတာပဲ..ဖွေ။တျော..အဲ့ခငျဝငျ့ဝါက..တေျာ့ကို..ယူမယျဆိုရငျ..တျော ယူမလား..လို့..”
” မိနျးမရယျ..။ မဟုတျတာကို..မရဈစမျးပါနဲ့..။ ဟိုက..မငျးသမီးလေ..ငါ့လိုကောငျကို.. ယူမလား..။ ဖွဈမှ မဖွဈနိုငျတာကို..”
” မဖွဈနိုငျရငျလညျး..တေျာ့ပါးစပျက..ဘာလို့.. အဲ့မငျးသမီးနာမညျပဲ..တဖှဖှ ရှတျနရေတာလဲ ။ ဘာလို့..အဲ့မငျးသမီးလာရငျ..ပွူးပွဲ ကွညျ့နရေတာလဲ..?..။ ကဲ..ပွော..”
” ဪ..မိနျးမရယျ ။ ဒါကတော့..လူတိုငျးမှာ..ရှိတဲ့ အာသီသ..အခဈြမြိုးပေါ့..။ အာသီသ တဈခု အနနေဲ့….ခဈြလို့ ခဈြတာ..။ ခဈြစရာကောငျးလို့..ခဈြတာလေ..။ သူ့ကို ခဈြတဲ့အခဈြက..လုံးဝ အဖွူထညျ..။ ဘာအရောငျ..ဘာကာလာမှ..မပါဘူး။ အဲ့သညျ့အခဈြမှာ..ရယူလိုတာတှေ..မပါဘူး။ ”
“ပိုငျဆိုငျလိုတာတှေ မပါဘူး။ ကာမတဏှာတှေ မပါဘူး..။ ဥပမာ..Ahpine သောကျရသေနျ့လေးလို ပေါ့..။..ဖွူဖွူစငျစငျ ကွညျကွညျလငျလငျ..ခဈြတဲ့ အခဈြမြိုးပါကှာ…”
” ဪ..မငျးကွတော့.. အမြားကွီး ပါသှားပွီလေ။ မငျးကို ခဈြတဲ့အခဈြမှာ ကွတော့… ကာမတဏှာ ပါမယျ။ ရယူပိုငျဆိုငျလိုတဲ့ အတ်တလောဘ ပါမယျ ။ မခှဲမခှာ နခေငျြတဲ့ သံယောဇဉျ ဆိုတာ ပါမယျ။ အနာဂတျကို ပုံဖျောမယျ့ ရညျရှကျခကျြ ဆိုတာပါမယျ။ သိုကျမွုံတဲ့မိသားစုလေး.. တညျဆောကျခငျြတဲ့ အိပျမကျဆိုတာကလညျး ပါအုံးမယျ..။ အိုကှာ.. မငျးကိုခဈြတဲ့ အခဈြမှာကွတော့…. အမြားကွီး အမြားကွီးပေါ့..”
“အငျး.. ဒါဆို.. ကြုပျကွတော့ ဘာနဲ့တူသလဲ?”
” အယျ..မငျးကွတော့…. ရှရေငျအေး တဈခှကျလိုပေါ့.မိနျးမရယျ..။ ပေါငျမုနျ့တှေ ကောကျညှငျးတှေ.. ကြောကျကြောတှေ.. နို့တှေ.. မုနျ့လကျဆောငျးတှေ.. အို.. အဲ့လို စုံစိအောငျ ပါနတေဲ့.. အမောပွေ.. ရှရေငျအေးလေး.. တဈခှကျလိုပေါ့..”
” အမလေး..တတျလိုကျတာနျော ။ယောကျြား..ခုလို ရှငျးပွလိုကျတော့လညျး..ဟုတျနတောပဲ..။ နားလညျပါပွီတျော..”
” အဲ့ဒါပဲလေ..မိနျးမရယျ။ ရှရေငျအေးနဲ့ ရသေနျ့..။အရသာခငျြး..တနျဖိုးခငျြး..တူမလား..။ဟုတျတယျနျော.. ကဲ..မငျးပွောသလို….ခငျဝငျ့ဝါက..
ငါ့ကို ယူမယျပဲ..ထား။ ငါက..ယူလို့..ရမလား?။ မရဘူးနျော..”
” ဟ…မငျးစဉျးစားကွညျ့လေ။ သှသူ..ဘယျလောကျပဲ..ကွညျသနျ့နတေဲ့ရေ..ဖွဈဖွဈ။..ရှရေငျအေးထဲ..လာရောရငျ… အဲ့ရှရေငျအေးက..ကောငျးပါတော့မလား။ပကျြပွီလေ။ ..ဟုတျတယျနျော”
“အဲ့ဒါ.. ပွောတာ..။ ရှရေငျအေး စားပွီးမှ…. ရေ သောကျရငျတော့.. တဈမြိုးပေါ့..”
“ဘာ.. ဘာ. ဘာ…!!!!!!” 😁😁😁 မူရငျးရေးသားသူကိုလေးစားစှာခရကျဒဈပေးပါသညျ။